Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Ny fon'ny fandaharam-pianarana IMEX America
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fanabeazana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Etazonia Vaovao Vaovao
"Fotoana izao hieritreretana ny zava-drehetra," hoy i Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX. “Nino foana izahay fa ny famolavolana hetsika dia fahaiza-manao fototra ho an'ireo matihanina amin'ny sehatra misy antsika. Ankehitriny dia anjarantsika rehetra ny manamafy ny fanarenana ny sehatra misy antsika, sy ny tontolo midadasika amin'ny fomba fanavaozana sy maharitra ho an'ny rehetra amin'ny alàlan'ny fitsapana ireo fahaiza-manao ireo. Namorona programa fanabeazana izahay izay manome fisainana vaovao momba ny hoavin'ny fihaonana sy ny famolavolana hetsika miaraka amin'ireo fivoriana natokana ho an'ny faharetana, ny fahasamihafana, ny maha-olona ary ny haitao miaraka amin'ireo lohahevitra hafa. ”
Ny ekipan'ny IMEX dia namerina nandinika ny làlam-panabeazany tamin'ity taona ity.
Ny fandaharam-pampianarana dia hita taratra amin'ireo fanamby sy laharam-pahamehana amin'ny indostria ankehitriny.
Amin'ity taona ity, izy io dia mampahafantatra ny fivoarana sy ny fanabeazana matihanina, ny fahaiza-mamorona amin'ny serasera, ny fahasamihafana, ny fitoviana ary ny fidirana, ny fanavaozana sy ny haitao ary ny fanarenana tanjona.
Ny programa fianarana maimaimpoana ao amin'ny Amerika IMEX, tanterahina ny 9 - 11 Novambra any Las Vegas, mandefa miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanan'ny MPI, amin'ny 8 Novambra ary manohy atrikasa, latabatra ary seminera mafana mandritra ny telo andro amin'ilay fampisehoana. Toy ny mahazatra, ny seho dia hanasongadinana tononkira MPI isan'andro ihany koa, ny antsipiriany feno Eto.
Ny ekipan'ny IMEX dia namerina nandinika ny làlam-panabeazany tamin'ity taona ity, nampahafantatra ny Fivoarana sy ny fampivoarana ny asa, ny fahaiza-mamorona amin'ny serasera, ny fahasamihafana, ny fitoviana, ny fampidirana ary ny fahazoana miditra, ny fanavaozana sy ny haitao ary ny fanarenana kendrena hita taratra ireo fanamby sy laharam-pahamehana amin'ny indostria ankehitriny.
Famolavolana hetsika hampahatanjaka ny olona sy ny planeta
In Famolavolana fanahy iniana hanaovana fanarenana misy tanjona, Mariela McIlwraith, ny filoha lefitra maharitra sy ny fivoaran'ny indostria ao amin'ny EIC, dia manome antsipiriany ny fomba hanampian'ny Prinsipan'ny fikambanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny hetsika maharitra maharitra ny herin'ny hetsika hitarika fanarenana miorina amin'ny olona, ​​ny planeta ary ny fanambinana.
Fiaraha-miasa amin'ny famolavolana hetsika dia mipetraka eo afovoany sy afovoany #EventCanvas: Ny sarintaninao amin'ny fivoriana tsy manam-paharoa. Roel Frissen sy Ruud Janssen, mpamorona ny #EventCanvas ary mpiara-manorina ny Event Design Collective, dia te hanampy ireo ekipa hijery ny 'tanjon'izy ireo amin'ny sary lehibe' ary hitondra mpandray anjara marobe amin'ny fizotran'ny endrika.
Ahoana no fomba ahafahantsika mamorona traikefa misy dikany izay mampihetsika ny mpihaino? Ity dia iray amin'ireo fanamby atrehana ao amin'ny EventMB's Event Innovation Lab™. Ny ekipa dia hizara ohatra tena misy amin'ny famolavolana hetsika ampiasaina hanakanana ny firosoana ary koa fomba fanao tsara indrindra amin'ny teti-bola sy hahazoana vola miditra amin'ny tohanana.
Ny faharetana dia tsy maintsy ampidirina hatramin'ny fanombohan'ny fizotry ny famolavolana hetsika. Izany dia hoy i Courtney Lohmann, talen'ny andraikitra ara-tsosialy ara-tsosialy ao amin'ny PRA. Ny sesiny Ny fitohanana dia lakilen'ny famolavolana hetsika manohitra tranga matanjaka ho an'ny faharetana mitambatra rehefa mametraka tanjona sy tanjona kendrena.
Mampiasa ny famolavolana hetsika mba hamoahana 'revolisiona indray' ary hianarana avy amin'ny natiora mba hanampiana ireo mpanatrika hanana traikefa hetsika mahasalama, mahasambatra ary misy dikany kokoa. Ny ho avy tadiavinay: mampikatso ny revolisiona famerenana amin'ny laoniny. Vaovao avy amin'ny sanganasan'izy ireo momba ny Revolisiona Regenerative IMEX sy ny natioran'ny habaka, Guy Bigwood, Lehiben'ny Changemaker ao amin'ny GDS-Movement, ary Janet Sperstad, talen'ny mpampianatra ao amin'ny Madison College, dia hanome ny fikarohana lalina ataon'izy ireo amin'ny antsipiriany.
Ny tanana manampy ny teknolojia
Ny traikefa amin'ny hetsika dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny teknolojia vaovao ary i Maritz dia mizara ny fianarany voalohany Fanelingelenana amin'ny fotoanan'ny fanarenana: namerina nanangana ny zava-nitranga tamin'ny alàlan'ny teknolojia vaovao i Maritz. Aaron Dorsey, Talen'ny Senior Product Management ary Amy Kramer, Leader ny fanavaozana ny vokatra sy ny vokatra, dia mizara ny fianaran'ny fikambanana amin'ny areti-mandringana, ireo fanamby natrehin'izy ireo ary ireo mpanakorontana vaovao hitan'izy ireo tamin'ity resaka firesaka ity.
AI dia teknolojia afaka mandrisika ny fandraisan'anjaran'ny mpijery manazava i Michael Campanelli, CEO Cofounder an'ny Chillwall AI: "Na te ho mpivarotra tsaratsara kokoa ianao dia manolora traikefa mpitsidika ambony, na mampitombo ny vola azo, ilaina ny mahatakatra ny tondro ara-pientanam-po. AI dia afaka manampy… betsaka ”. Hanolotra ny fotoana i Michael Ny fanapahana fanapahan-kevitra sy ny herin'ny AI-centrica.
Fitsangatsanganana an-tsambo sy fitsangatsanganana any an-tany efitra
Ankoatry ny fanabeazana eo amin'ny seho fampisehoana dia afaka mizaha ny toerana vaovao an'ny IMEX America, Mandalay Bay, ihany koa ny mpanatrika mandritra ny andiany maromaro. Fihaonana amin'ny fitsangatsanganana centric miaraka amin'ny MGM Resorts manolora fijerena manokana ny fiasa ambadiky ny seho sy ny foiben-toeran'ny fivoriambe. Ny ekipa MGM miaraka amin'ny MeetGreen, EIC ary GES, dia hitondra ireo mpandray anjara koa ho any an'efitr'i Nevada hitsidika ny Mega Solar Array ao amin'ny MGM Resort ao anatin'ny Fandrefesana sy fitantanana dian-tongotra karbaona hetsika sy fitsangatsanganana an-dàlana Solar.
Jereo ny talen'ny fahalalana & hetsika IMEX, Dale Hudson, ary mpanolotsaina ambony momba ny fifandraisana sy ny indostria, Natasha Richards, miresaka momba ny fandaharana mpandahateny be dia be momba ny fandaharana, lalana vaovao ary fandraisana andraikitra vaovao.
Ny ekipa IMEX dia nanamboatra ny fandaharam-pampianarana an-tserasera sy ny asany amin'ny fikarohana. Ireo mpitsidika IMEXAmerica.com dia afaka mikaroka amin'ny lohahevitra, endrika, teny lakile ary andro ary koa ny fametrahana sivana. Mandehana mikaroka ny programa momba ny hetsika.